अषोज ७, २०७६ | 24th September, 2019
2100 पटक पढिएको
सोलुखुम्बु, १० जेठ । आरोहण यात्रामा रहेका दुई एकल महिलाले सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेकेका छन् । ‘हामी पनि गर्नसक्छौँ’ भन्ने नारासहित सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका–४ खुम्जुङका निमाडोमा शेर्पा र फुरदिकी शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् ।
सगरमाथा क्षेत्रमै पति गुमाएका निमा डोमा शेर्पा र फुरदिकी शेर्पाले बिहीबार बिहान ५ः२५ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । निमा डोमा शेर्पाका पति छिरिङ वाङछु शेर्पाले पाँच वर्षअघि सगरमाथामा गएको हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका थिए भने फुरदिकीका पति मिङ्मार शेर्पाको छ वर्षअघि सगरमाथा चढ्ने बाटो बनाउँदै गर्दा खर्पसमा भासिएर ज्यान गएको थियो । हिमालबाट खोसिएको खुशी हिमालमै खोज्ने भन्दै फरदिकी र निमा डोमाले आरोहण यात्रा तय गरेका थिए ।
एकल महिला सधैँ शोकमा बस्ने हैन शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि आरोहण गरेको आरोही महिलाको भनाइ छ । वर्षेनी हिमाली क्षेत्रको पदयात्रमा गएका सयाँै आरोही र उनका सहयोगीको मृत्यु हुने गरेको छ । आरोही महिलाले भने आफूहरु जस्तै हिमालमा पति गुमाएका एकल महिलालाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
आफन्त वियोगले कोठामै दिन कटाइरहेका एकल महिलालाई विभिन्न सीप र योजना दिएर सङ्घर्षको मैदानमा उतार्ने लक्ष्यसहित अभियानका लागि सगरमाथा अरोहणमा गएको उनीहरुको भनाइ छ । पतिसँगै जोक्पे लिएर धेरैपटक आधार शिविर पुगेका फरदिकी र निमाले पति गुमाएपछि पनि यो पेशालाई निरन्तरता दिँदै उचाईतर्फ लगेका हुन् । सगरमाथाको शिखरमा पुगेर फर्केपछि सगरमाथालगायत हिमालयमा ज्यान गुमाउनेका पत्नीलाई सङ्गठित गर्दै संस्था खोल्नेसमेतको उनीहरुको योजना छ ।
आरोहण मौसम शुरु भएदेखि आजसम्म पाँच जना आरोहीको मृत्यु भएको छ । सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । उनीहरुको आरोहण सकेर फर्कनेक्रममा मृत्यु भएको सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
दशैँ, तिहारका लागि दुई दिनमा २० हजारले लिए अग्रिम टिकट
दुर्घटनावाट मृत्यु हुने पाँचै जनाको पहिचान खुल्यो
बोसो कम गर्नका लागि खानेकुराहरु
निःसन्तान नहुन महिलाले के गर्ने, के नगर्ने ?
सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने ज्योतिष शास्त्रका उपायहरु
यौन समय लम्याउने केही उपायहरू
उमेर अनुसार कति पटक सेक्स गर्नु उचित हुन्छ ?
पुरुषको कुन अंगसँग आकर्षित हुन्छन् महिला ?
जानिराखौं, यस्ता महिलासँग भुलेर पनि यौन सम्पर्क नगर्नुहोस्